Nezvedu - Dongguan Kangna Electronic Technology Co., Ltd.
Dongguan Kangna Magetsi Technology Co, Ltd.
ndiye mumwe vaitungamirira pcb vagadziri mu China riri nyanzvi pcb kugadzirwa, pcb gungano, pcb design, pcb kumumvuri, nezvimwewo zvemagetsi kugadzira basa.
Iyo kambani yakavambwa mukutanga kwa2006 muShajiao commuity, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province. Iyo fekitori inovhara nzvimbo yekugadzira
ye10000 mativi emamirimita aine huwandu hwemwedzi wega hwe50000 Sq.meter uye ine yakanyoreswa capital ye8 mamirioni RMB.
Iyo kambani ine vashandi mazana masere, kusanganisira 10% yekutsvaga uye kusimudzira; 12% yehunhu kudzora; uye 5% yehunyanzvi tekinoroji timu ine anopfuura makore gumi echiitiko muPCB indasitiri.
Zvigadzirwa zvikuru zvekambani iyi 1-40 pcb pcb, inosanganisira MCPCB (mhangura nealuminium based board), FPC, rigid_flex board, solid PCB, ceramic based board, HDI board, high Tg board, heavy copper board, high frequency frequency board nePCB . Zvigadzirwa edu anoshandiswa nevakawanda mumaindasitiri, zvokurapa, telecommunication uye motokari indasitiri, kombiyuta, etc.
Tinogona kukupa iwe nekukurumidza kutendeuka prototype, diki batch uye hombe batch mangé rezvigadzirwa. Tinogona kubata zvese zvako zvakaoma zvakanyanya zvinodiwa nyore. Yedu yemhando yepamusoro zvigadzirwa uye masevhisi achakubatsira iwe kuvandudza mhando yezvako zvigadzirwa, kukuunzira iwe mutengo mukana, uye pakupedzisira kukuita iwe kuti uwedzere kukwikwidza mumusika wako.
Isu tinoita yakasimba yemhando yekudzora sisitimu yekuona kuvimbika uye kugadzikana kwehunhu hwechigadzirwa. Yedu pcb zvigadzirwa zvinoongororwa zvese kuburikidza nePCB yekugadzira maitiro kuti ive nechokwadi chemhando yepamusoro yakadhindwa wedunhu mabhodhi anoendeswa kwauri.
Isu takapasa chitupa cheUL, uye IATF16949. Tinotenda kuti mhando upenyu, uye kutsvaka razero urema ndiko kwedu yepamusoro chinangwa. Tiye kambani anoshandisa bhizinesi uzivi hwe "kuva akatendeseka, anoshanda nesimba, mhando yekutanga, sevhisi kutanga", Achiomerera kune yakanakisa tsika tsika yekambani-inotarisana nevanhu, kuwana mukana wekuhwina-kukunda kune vanobatirana uye nzanga.
Tinoda kunzwa kubva kwauri kana iwe uine chero mibvunzo kana yakakosha zvinodiwa.
Yakagadzwa SMT Bhizinesi Yuniti yekupa imwechete-yekumira sevhisi kune vatengi.
Yakagadzwa yekutsvagisa nekusimudzira nzvimbo.
Kugadzirira iyo SMT Bhizinesi dhipatimendi.
Iyo fekitori yakaenda kunzvimbo nyowani uye ikawedzera nyowani yekugadzira uye yekuyedza michina.
Wedzera simba rekugadzira kuenda ku30000 Sq.m pamwedzi.
tanga kuunza MCPCB yekugadzira mutsara, gadzira substrate yemhangura uye aluminium substrate pcb.
KangNa Electronic Technology Co, Ltd. yakavambwa.
Nekuchenjera dhizaini yega yega chigadzirwa kuti chiitwe boutique
Tora mirairo yega yega zvakanyanya uye uve nechokwadi chekutumira-nguva
Shinga zvakakwana kutarisana nezvose zvinoda, gadziridza zvakakosha zvinodiwa
Kuvimbika kumutengi wese uye nekupa inogutsa sevhisi